Mastering Tutorial (Complete Guide) (မြန်မာစာတန်းထိုး Original Video Guide)
Mastering Tutorial (Complete Guide)
(မြန်မာစာတန်းထိုး Original Video Guide)
Sanay Oo (SAMM Computer Music School)
Posted by Phoe Aye at 10:33 PM 1 comment:
Korg M1 AU - vst for MAC
Mac OS အတွက် Korg M1 AU - vst ပါ ။ ဟောင်းပေမယ့် ကောင်းနေဆဲ VST လေးမို့ Mac အတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ။
Posted by Phoe Aye at 10:29 PM No comments:
Labels: Recording Software များ
Home Audio Recording Group မှာ တစ်ယောက်တောင်းထားတာတွေကလို့ ဖိုင်ဆိုက် သေးတာနဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ။
သုံးစွဲပုံကိုတော့ Utube မှာ လေ့လာကြည့်ပါ ။
Posted by Phoe Aye at 10:27 PM No comments:
Note by KBကျော်ဝင်းဦး
Posted by Phoe Aye at 10:24 PM No comments:
Labels: မနော သီချင်းနုတ်စ်များ
Note by KB မောင်မောင်စိုး
Posted by Phoe Aye at 7:55 AM No comments:
Labels: သာဒီးလူ သီချင်းနုတ်စ်များ
လွယ်လွယ်လေး ရခဲ့တော့ ဝေလ
Posted by Phoe Aye at 7:46 AM No comments:
Labels: ဝေလ သီချင်းနုတ်စ်များ
Posted by Phoe Aye at 7:45 AM No comments:
Posted by Phoe Aye at 7:43 AM No comments:
မျှော်လင့်ချက် တစ်စုံတစ်ရာ နီနီခင်ဇော်
Posted by Phoe Aye at 7:42 AM No comments:
ဂီတ၀ါသနာရှင်တွေအတွက် MP3 သီချင်းဖိုင်ကို Guitar Chord တွေ ရှာပေးတဲ့ ဆောစ်ဝဲပါ။
Posted by Phoe Aye at 9:24 PM5comments:
ကျနော်တို့ 32plugin တွေကို 64 Daw တွေမှာ သုံးစွဲလိုတဲ့အခါ
64 plugin တွေကို 32 Daw တွေမှာ သုံးစွဲလိုတဲ့အခါ
jbridge15 ဆောစ်ဝဲ ကို အသုံးပြုပြီး 32 to 64bi - 64 to 32 bit Plugin အဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။
Posted by Phoe Aye at 9:02 AM No comments:
Vocal သံကို ပိုမို အားပြည့်စေဖို့ ဟာမိုနီတွေ ထည့်ပေးနိုင်တဲ့ ဆောစ်ဝဲပါ။
Posted by Phoe Aye at 8:52 AM No comments:
Posted by Phoe Aye at 8:28 AM No comments:
Labels: Recording Ebook များ
Celemonyကထုတ်တဲ့melodyneကိုသိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ အခု2016မှအသစ်ထွက်လာတဲ့Melodyne Studio4ကို win နဲ့ mac အတွက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဗားရှင်းအသစ်မှာဖန်ရှင်အသစ်တွေတော်တော်များများထည့်ပေးထားတာတသိထားမိမှာပါ အရမ်းမိုက်ပါတယ်
စမ်းသုံးချင်ရင်တော့ အောက်မှာ R2Rကခရက်ထားပြီးသားပါ installပြီးအသုံးပြုလို့ရပါပြီ,, အဆင်ပြေပါစေ။
ခရက်ဒစ် -- ကို Ze Ro
Posted by Phoe Aye at 12:05 PM No comments:
Ableton Live Suite v9.6 WIN & MAC
Ableton အသုံးပြုတဲ့သူတွေအတွက် 2016မှာupdateပေးထားတဲ့
Ableton Live Suite v9.6ကို WIN နဲ့ MAC အတွက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဆင်ပြေပါစေ,,,
Ableton Live Suite v96WIN
Ableton Live Suite v96OSX
ခရက်ဒစ် ကို Ze Ro
Posted by Phoe Aye at 11:06 PM No comments:
Dance Music Manual second Editon PDF Ebook
ဒေါင်းရန် လင့် Dance Music Manual second Editon
Posted by Phoe Aye at 5:05 PM No comments:
Wave Plugin Tutorial
Wave Plugin သုံးစွဲပုံကို အသေးစိတ် သင်ပေးတဲ့ Tutorial တွေပါ။
ကို ZE RO Upload လုပ်ပေးထားတာပါ။
Posted by Phoe Aye at 8:19 AM 1 comment:
Labels: Recording Tutorial
toontrack ရဲ့ EZkey pianos ကို ကျတော်တင်ထားပြီးပါပြီ ဒါပေမဲ့ ဒေါင်းရတဲ့သူကဒေါင်းပြီး တချို့ကျအဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ ကျတော် ထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ winနဲ့mac အတွက်နှစ်ခုစလုံးဖြစ်ပြီး mac user အတွက်စိတ်မကောင်းစရာတခုကတော့ R2R keygen ကအခုထိ macပေါ်မှာ runလို့မရတာပါပဲ။ ထုံးစံအတိုင်း windows အကူအညီနဲ့ပဲတင်ကျရတာပေါ့။
အခုတင်ထားတာကတော့ EZkeys pianosတချို့ဖြစ်တဲ့
တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ တခြားpianoတွေလိုချင်ရင်တော့ မန့်ထားခဲ့လို့ရပါတယ်။ အဆင်ပြေပါစေ....
Posted by Phoe Aye at 8:16 AM No comments:
Waves Complete V9r30 for Win
Waves plug-in တွေတင်ပေးပါဆိုလို့
Waves Complete V9r30ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်,,
အထဲမှာWaves plugin ရာကျော်ပါဝင်ပါတယ်,
အထဲမှာinstall လုပ်နည်းကပါပေမဲ့ ပေါ်တူဂီစာနဲ့ရေးထားတာရယ် ပြည့်ပြည့်စုံမရှင်းပြထားတာရယ် ဆိုတော့ တချို့အခက်အခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်,,
1.ပထမဦးဆုံး Waves CompleteV9r30ကိုဖွင့်ပါ(နည်းနည်းကြာနိုင်တယ် ထပ်ဖွင့်စရာမလိုပါ)
2. Add/Remove Productsကိုရွေးပြီး Next>ကိုနိုပ်ပါ
3.ကိုယ်လိုချင်တဲ့plugin ကိုအမှန်ခြစ်နိုင်ပါတယ် ဒါမေမဲ့ အကုန်လုံးခြစ်စရာမလိုပါဘူး
-Abbey Road Collection
5.WavesShell-AAX v9r30 Pro Tools 12 ကိုဖွင့်ပါ,
အခုaaxpluginအတွက် patchအောင်သွားပါပြီ ဒါပေမဲ့vstpluginအတွက်ထပ်ပြီးpatchတွေထည့်ပေးရပါတယ်,
1.ပထမဦးဆုံး start> windowd(c:) ကိုသွားပါ
2.Program File (x86)> Waves> Waveshells ကိုသွားပါ
3.win64 bit အတွက်
WavesShell-VST 9.3_x64.dll နဲ့
WavesShell-VST 9.61_x64.dll ကို copyပြီး
c:\_program file\_steinberg\_vstplugins ကိုသွားပြီး pasteပြီး replace ပေးလိုက်ပါ
WavesShell-VST 9.3.dll နဲ့
WavesShell-VST 9.61.dll ကို copyပြီး
c:\_program file(x86)\_steinberg\_vstplugins ကိုသွားပြီး pasteပြီး replace ပေးလိုက်ပါ
အဆင်ပြေပါစေ,,, ကျတော်ရှင်းပြမှပိုရှပ်သွားရင်တော့ တောင်းပန်ပါတယ်:)
Posted by Phoe Aye at 8:14 AM No comments:
EZ Drummer2& Pack များ
Home Recording သမားတွေ ကြိုက်ကြတဲ့ EZ Drummer2& Pack များ
Toonntrack EZdrumer2ပါ. သိပြီးသားရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မှာပါ. မရှိသေးတဲ့သူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်. Home Studio သမားတွေအတွက် မဖြစ်မနေဆောင်ထားသင့်ပါတယ်. တီးတဲ့အခါမှာလည်း အရမ်းကိုမြန်ဆန်လွယ်ကူပါတယ်.
ပတ်စ်ဝေါ့ခံထားပါတယ်. ပတ်စ်ဝေါ့တောင်းရင်တော့ zero လို့ ရေးလိုက်ပါ။
Toontrack EZDrummer2အတွက် MIDI packs for win and mac တွေပါ။
toontrack EZX 20ခု တင်ထားပါတယ်။
Guitar Plugin ကောင်းကောင်းကြိုက်သူတွေအတွက်
Ample Sound ရဲ့ အရမ်းကောင်းတဲ့guitarsတွေကိုတော့ သိကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ တနိုင်တပိုင်home studioမှာ ရိုးရိုးသီချင်းတစ်ပုဒ်ကို အသံရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့အကြည်လင်ဆုံးတီးချင်တယ် အကောင်းစားဂီတာတွေ မဝယ်နိုင်ဘူး ဆင်ဖို့effectsတွေလည်းမရှိဘူး ဆိုရင်တော့ ကွန်ပြူတာတစ်လုံးနဲ့ ဒီကောင်တွေနဲ့ခိုင်းလိုက်ရင်တော့ တကယ့်ဂီတာအစစ်နီးပါးလောက်ကို အသံထွက်ပါတယ်။ သူ့မှာပါဝင်တဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကတော့ ဂီတာအစစ်မှာလိုပဲ အကုန်လုံးလုပ်လို့ရတယ် ဥပမာ-Strum, Natural Harmonic, Artificial Harmonic, Hammer On/Pull Off, Trill, Bend, Tremolo Bar, Legato Slide, Slide In, Slide Out, Vibrato, Tremolo Picking, Palm Mute, Popping, Tapping, Let Ring, Staccato, Dead Note, Grace Note, Ghost Note, Accentuated Note, Fade In, etc.
AGM2- Martin D41 acoustic guitar
download here- https://app.box.com/s/l02j5xn7cfoy6yl6kruvw7s4ro9tfu3k
AGT2- Taylor 714CE acousti guitar
download here- https://app.box.com/s/m5ek1l0vj9k77g92jtk4r9xpjuhgxz7r
AGL2- Alhambra Luthier classic guitar
ABP2- Fender Precision electric baas
Posted by Phoe Aye at 7:56 AM No comments:
Mastering Tutorial (Complete Guide) (မြန်မာစာတန်းထ...
PC Recording Studios For Dummies by Jeff Strong.pd...